Ụkpụrụ thermodynamics: ihe ha bụ na ihe ha bụ maka. Meteorology netwọkụ
Ụkpụrụ nke thermodynamics
Portillo nke German | 19/10/2021 09:45 | Ciencia
Na ngalaba physics, enwere ngalaba na -ahụ maka ịmụ mgbanwe mgbanwe ọkụ na ọrụ rụpụtara na sistemụ. Ọ bụ maka thermodynamics. Ọ bụ ngalaba nke physics nke na -ahụ maka ọmụmụ mgbanwe niile, nke bụ naanị nsonaazụ nke usoro gụnyere mgbanwe na ọnọdụ steeti nke okpomọkụ na ume na ọkwa nnukwu. E nwere ọtụtụ ụkpụrụ nke thermodynamics nke bụ isi maka ọtụtụ akụkụ nke physics.
Yabụ, anyị ga -agwa gị n'isiokwu a ihe bụ ụkpụrụ nke thermodynamics na ihe ọ dị mkpa.
1 Njirimara nke thermodynamics
2 Ụkpụrụ nke thermodynamics
2.1 Ụkpụrụ mbụ
2.2 Ụkpụrụ nke abụọ
2.3 Ụkpụrụ nke atọ
2.4 Iwu efu
Njirimara nke thermodynamics
Ọ bụrụ na anyị enyocha thermodynamics oge gboo, anyị ga -achọpụta na ọ dabere na echiche nke sistemụ macroscopic. Usoro a bụ naanị akụkụ nke ịdị mma anụ ahụ ma ọ bụ echiche nke nkewapụ na gburugburu mpụga. Iji mụọ sistemụ thermodynamic nke ọma, a na -echekarị na ọ bụ oke anụ ahụ ọ naghị ewute ya site na mgbanwe ike na gburugburu ebe obibi dị na mpụga.
A na -akọwa ọnọdụ nke sistemụ macroscopic na nha nha site na ọnụọgụ akpọrọ mgbanwe thermodynamic. Anyị maara mgbanwe ndị a niile: ọnọdụ okpomọkụ, nrụgide, olu na ihe mejupụtara kemịkal. Ihe mgbanwe ndị a niile na -akọwapụta sistemụ na nha ya. Site na njikọta nke ngwa mba ụwa, etinyerela akara ndị bụ isi nke thermodynamics kemịkal. Iji nkeji ndị a nwere ike rụọ ọrụ nke ọma ma kọwaa ụkpụrụ nke thermodynamics.
Otú ọ dị, enwere ngalaba nke thermodynamics nke na -anaghị amụ nhatanha, Kama nke ahụ, ha na -ahụ maka inyocha usoro thermodynamic nke ejiri mara nke ọma na enweghị ike nweta ọnọdụ nha nha n'ụzọ kwụsiri ike.
Enwere ụkpụrụ 4 nke thermodynamics, edepụtara site na efu ruo isi atọ, iwu ndị a na -enyere aka ịghọta iwu niile nke physics na ụwa anyị na ọ gaghị ekwe omume ịhụ ụfọdụ ihe ịtụnanya na ụwa anyị. A na -akpọkwa ha aha iwu nke thermodynamics. Iwu ndị a nwere mmalite dị iche iche. A na -emepụta ụfọdụ site na usoro ndị gara aga. Iwu ikpeazụ a maara maka thermodynamics bụ iwu efu. Iwu ndị a na -adịgide adịgide na nyocha na nyocha niile emere n'ụlọ nyocha. Ha dị mkpa maka ịghọta ka eluigwe na ala anyị si arụ ọrụ. Anyị ga -akọwa ụkpụrụ nke thermodynamics otu otu.
Iwu a na -ekwu na ike enweghị ike ịmepụta ma ọ bụ mebie ya, enwere ike gbanwee ya. Nke a makwaara dị ka iwu nchekwa ọkụ. N'ezie, nke a pụtara na n'ime usoro anụ ahụ ọ bụla kewapụrụ na gburugburu ya, ume ya niile ga -abụ otu. Agbanyeghị na enwere ike ịtụgharị ume n'ụdị ume ndị ọzọ n'otu ụdị ma ọ bụ ọzọ, nchikota ume ndị a niile na -abụ otu.
Anyị ga -enye ọmụmaatụ iji ghọta ya nke ọma. N'ịgbaso ụkpụrụ a, ọ bụrụ na anyị na -enye ike ụfọdụ na sistemụ anụ ahụ n'ụdị okpomoku, anyị nwere ike gbakọọ ike niile site na ịchọta ọdịiche dị n'etiti mmụba nke ike ime na ọrụ nke sistemụ na gburugburu ya na -arụ. Nke ahụ bụ, ọdịiche dị n'etiti ike sistemụ ahụ nwere n'oge ahụ yana ọrụ ọ rụrụ ga -abụ ike ọkụ ewepụtara.
Ụkpụrụ nke abụọ
Ọ bụrụ na enwere oge zuru oke, sistemụ niile ga -emecha tufuo ha. A na -akpọkwa ụkpụrụ a iwu entropy. Enwere ike ichikota ya otu a. Ọnụ nke entropy na mbara igwe ga -abawanye ka oge na -aga. Entropy nke sistemụ bụ ndepụta iji tụọ ogo ọgbaghara. Yabụ, Ụkpụrụ nke abụọ nke thermodynamics na -agwa anyị na ozugbo sistemụ ahụ rutere n'ọ̀tụ̀tụ̀, ọ ga -abawanye ogo ọgbaghara na sistemụ. Nke a nwere ike ịpụta na ọ bụrụ na anyị enye sistemụ oge zuru oke, ọ ga -emecha bụrụ nke na -ahazighị oke.
Nke a bụ iwu na -ahụ maka ịkọwa enweghị mgbaghari nke ụfọdụ ihe anụ ahụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ na -enyere anyị aka ịkọwa ihe kpatara akwụkwọ akwụkwọ agbaala ọkụ enweghị ike ịlaghachi n'ụdị ya. N’usoro ihe a nke amara dika akwukwo na oku, aghara aghara adila nke ukwu nke na odighi enwe ike ilaghachi na mbido ya. Iwu a na-ewebata ọrụ ala entropy, nke n'ihe banyere sistemu anụ ahụ bụ ọrụ maka ịnọchite ogo ọgbaghara na oke mfu ya na-apụghị izere ezere.
Iji ghọta ụkpụrụ nke abụọ nke thermodynamics anyị ga -enye ihe atụ. Ọ bụrụ na anyị gbaa ụfọdụ ihe ọkụ ma tinye bọọlụ ahụ na ntụ ya, anyị nwere ike ịhụ na enwere obere ihe karịa na mbido mbụ. Nke a bụ n'ihi na okwu aghọọla gasị Enweghị ike ịgbake ha, ha ga -agbasasị ma tụgharịa. Nke a bụ ka anyị si hụ na steeti otu enwere opekata mpe karịa na steeti abụọ.
Ụkpụrụ nke atọ
Mgbe e ruru efu zuru oke, usoro sistemụ anụ ahụ na -akwụsị. Zuru oke bụ okpomọkụ kacha ala anyị nwere ike iru. N'okwu a, anyị na -atụle ọnọdụ okpomọkụ na ogo Kelvin. N'ụzọ dị otu a, enwere ike ịsị na ọnọdụ okpomọkụ na jụrụ oyi na -eme ka entropy nke sistemụ bụrụ efu. N'ọnọdụ ndị a, ọ dị ka mgbachi anya. Mgbe ọ ruru oke efu, usoro sistemụ anụ ahụ na -akwụsị. Yabụ, entropy ga -enwe nke kacha nta mana na -adịgide adịgide.
Ịnweta oke efu ma ọ bụ na ọ bụghị bụ ọrụ dị mfe. Ọnụ efu efu nke ogo Kelvin bụ efu, mana ọ bụrụ na anyị ejiri ya Ihe nrịgo nke ogo Celsius bụ, -273,15 degrees.
Iwu a bụ nke ikpeazụ chere wee kwuo na ọ bụrụ A = C na B = C, mgbe ahụ A = B. Nke a na -edobe iwu bụ isi na iwu nke iwu atọ ọzọ nke thermodynamics. Ọ bụ aha na -ewere iwu nha nha ọkụ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ bụrụ na sistemụ na sistemụ ndị ọzọ nọọrọ onwe ha na nha ọkụ ọkụ, ha ga -anọrịrị na nha nha ọkụ. Iwu a na -enye ohere ịtọlite ​​ụkpụrụ okpomọkụ. A na -eji ụkpụrụ a atụnyere ike ọkụ nke ihe abụọ dị iche na ọnọdụ nha ọkụ. Ọ bụrụ na ihe abụọ a nọ na nha ọkụ ọkụ, ha ga -adị mkpa n'otu ọnọdụ okpomọkụ. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ha abụọ agbanwee nguzo ọkụ nke sistemụ nke atọ, ha ga -emetụtakwa ibe ha.
Enwere m olile anya na site na ozi a, ị ga -amụtakwu gbasara ụkpụrụ thermodynamics nke njiri mara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Ụkpụrụ nke thermodynamics
Ihu igwe nke Australia